1. UKhisimusi, isikhathi senjabulo sokuphela konyaka lapho ubusika obubandayo bungena khona. Namuhla sinemenyu ye-dessert. Lokho kuzongeza injabulo, ubumnandi nemfudumalo emndenini esiwuthandayo. Iyakwazi ukugcoba ubumnandi kanye nawo wonke umndeni Ukwakha umoya omuhle nezinkumbulo, kanye nokwenza kalula, ukunambitheka okumnandi futhi kulula ukulungisa amathuluzi. Imvamisa kutholakala ezitolo ezinkulu ezinendlela eqhumayo yokwenza ushokoledi, izithako ezilula kodwa ezihlwabusayo • Ushokoledi (Omnyama, Ubisi) 200 g • Marchmello 100 g • Ubisi olusha (lokuphekelwa ngenkathi uphuza) 1 inkomishi isilungile, asihambe namabhomu eshokoledi ashisayo.
2. Ncibilikisa ushokoledi emlilweni omncane kusuka emathunjini, kufanele wephulwe noma uthathe izingcezu ezincane ukwenza ushokoledi uncibilike kalula.
3. Lungisa isikhunta se-silicone, gcoba ibhotela elilodwa elingafakwanga usawoti noma uwoyela womnqumo, uthele ushokoledi obilisiwe phezu kwesikhunta. Bese ufaka esiqandisini cishe imizuzu eyi-10 ukuvumela ushokoledi uphole ube izingcezu futhi ulolonge ngokuvumelana nesikhunta esikhethe. Isetshenziswa kakhulu njengokuphrinta okuyindilinga. Ngoba ungabeka ingilazi bese ubona isiyingi esihle esiyindilinga
4. Lapho ushokoledi usesimweni Unwrap futhi esiqandisini. Bese ukhipha isikhunta, usule bese ufaka ushokoledi bese uqhubeka kuze kube yilapho inani lanele.
5. Lapho ushokoledi uqina Futhi uthole inombolo egculisayo Beka i-marshmallow phakathi. Bese sandwich ushokoledi ophezulu naphansi Vala umjikelezo ohlukanisiwe nalo lonke ushokoledi. Qopha ube umumo omuhle oyindilinga Futhi ukuyibeka esiqandisini futhi, kulula futhi okubaluleke kakhulu, izingane ziyayithanda futhi ziyayijabulela imisebenzi eziyenzayo nomndeni wazo, kunjalo, kubalulekile ukuthi ungenza kanjani amabhomu eshokoledi ashisayo kalula, noma ngubani angakwenza, kepha inqubo ayikapheli okwamanje. Ake sibheke ukuthi ungayidla kanjani ukufaka ubumnandi nokufudumala kule sizini kaKhisimusi noNyaka Omusha.
6. Uwadla kanjani amabhomu eshokoledi ashisayo
7. Lungisa ikomishi elihle elikhudlwana kunamabhomu kashokoledi esiwalungisile. Uma ukuthola umoya kaKhisimusi Zama ukukhetha okuluhlaza okotshani, okubomvu ngokugqamile, noma ingilazi ephethe uphawu lomkhosi. Bese ubilisa ubisi olusha emlilweni omncane, uvuselele kuze kube yilapho ubisi luqala enyangeni bese intuthu efudumele intanta, uthele ubisi olushisayo engilazini yamabhomu kashokolethi. Ubisi olushisayo luzoncibilikisa ushokoledi kancane kancane futhi lizohogela lapho uphuza. Ubisi olunephunga elimnandi oluxubene nokunambitheka okuthambile koshokoledi Lapho udla isipuni IMarshmallows izobonisa ukunambitheka okumnandi. Nokunambitheka okuthambile nokuhlafunayo Inikeza umuzwa ofudumele kuwo wonke amagama
8. Izipho ezinhle kakhulu uthando, imfudumalo nokuba khona komndeni. Yibani nemisebenzi yokuzijabulisa ndawonye eholidini Ukwenza izinkumbulo ezinuka kamnandi Indlela yokwenza ukuqhuma ushokoledi eshisayo Ukwenza izikhathi zenjabulo zirekhode isikhathi eside ngangokunokwenzeka